सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्टसँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्टसँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस !
राजनीतिक ब्युरो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि आफ्नो सरकार ढाल्न भारतले चलखेल गरेको खुलासा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेकपामा खैलाबैला भएको थियो । प्रधानमन्त्री यो त्यतिकै हचुवाको भरमा दिएको अभिव्यक्ति हैन रहेछ । किनकी अहिले नेपालको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ दैनिक जसो सुचना आइनै रहेको हुन्छ । अति संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरुपनि उहाँलाई सिँधै आइरहेका हुन्छन् । यसैले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पछाडीको सत्यता खोज्न हामीले अत्यन्तै नजिकबाट यसको अनुशन्धान गर्न सुरु गर्यौँ ।